Le yimikhiqizo eku-inthanethi yakamuva enemisebenzi ephelele nokuqinisekiswa kwekhwalithi
I-Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd yatholakala ngo-2006. Bekulokhu kugxilwe ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bemishini yeqhwa kusukela lapho, kufaka phakathi umshini weqhwa we-flake, umshini we-tube ice, umshini we-block block njalonjalo.
2T flake ice umshini
Isitshalo sami seqhwa esijwayelekile esingu-2T / day sinomgqomo wokugcina iqhwa ongu-500kg. Lowo mgqomo weqhwa ungagcina ama-ice flakes angama-500kgs. Ikhasimende lingakhetha futhi umgqomo omkhulu wokugcina iqhwa, noma igumbi leqhwa. Ngegumbi elikhulu leqhwa, sizosebenzisa ifreyimu yensimbi ukuxhasa umshini weqhwa, futhi ifreyimu yensimbi izothwala sonke isisindo somshini weqhwa. Igumbi leqhwa litholakala ngaphansi komshini weqhwa. Ama-ice flakes awela egumbini leqhwa futhi agcinwe ngaphakathi ngokugcwele. Nayi imidwebo yesakhiwo ukukhombisa umshini wami we-2T / day flake ice nge ...
3T flake ice umshini
Isitshalo sami seqhwa esijwayelekile esingu-3T / day sinomgqomo wokugcina iqhwa oyi-1500kg. Lowo mgqomo weqhwa ungagcina ama-ice flakes ayi-1500kgs. Ikhasimende lingakhetha futhi umgqomo omkhulu wokugcina iqhwa, noma igumbi leqhwa. Igumbi leqhwa likhulu ngokwanele ukugcina wonke ama-ice flakes enziwe ngesikhathi sasebusuku ngomshini weqhwa we-3T / day flake ice. Sizosebenzisa ifreyimu yensimbi ukuxhasa umshini weqhwa, futhi ifreyimu yensimbi izothwala sonke isisindo somshini weqhwa. Igumbi leqhwa litholakala ngaphansi komshini weqhwa. Ama-ice flakes awela egumbini leqhwa futhi agcinwe ...
5T flake ice umshini
Isitshalo sami seqhwa esijwayelekile esingu-5T / day sinomgqomo wokugcina iqhwa ongu-2500kg. Lowo mgqomo weqhwa ungagcina ama-ice flakes angama-2500kgs. Igumbi leqhwa likhulu ngokwanele ukugcina wonke ama-ice flakes enziwe ngesikhathi sasebusuku ngomshini weqhwa we-5T / day flake ice. Ikhasimende lingakhetha futhi amakamelo amakhulu e-ice. Sizosebenzisa ifreyimu yensimbi ukuxhasa umshini weqhwa, futhi ifreyimu yensimbi izothwala sonke isisindo somshini weqhwa. Igumbi leqhwa litholakala ngaphansi komshini weqhwa. Amaqhwa eqhwa awela egumbini leqhwa futhi agcinwe ngaphakathi kwe-automa ...
10T flake ice umshini
20T flake ice umshini
Isitshalo sami seqhwa esijwayelekile esingu-20T / day sinomgqomo wokugcina iqhwa ozi-10,000kg. Lowo mgqomo weqhwa ungagcina ama-ice flakes angama-10,000kgs. Igumbi leqhwa likhulu ngokwanele ukugcina wonke ama-ice flakes enziwe ngesikhathi sasebusuku ngomshini weqhwa we-20T / day flake ice. Ikhasimende lingakhetha futhi amakamelo amakhulu e-ice. Sizosebenzisa ifreyimu yensimbi ukuxhasa umshini weqhwa, futhi ifreyimu yensimbi izothwala sonke isisindo somshini weqhwa. Igumbi leqhwa litholakala ngaphansi komshini weqhwa. Ama-ice flakes awela egumbini leqhwa futhi agcinwe ngaphakathi egcwele -...
30T flake ice umshini
Isitshalo sami seqhwa esijwayelekile esingu-30T / day sinomgqomo wokugcina iqhwa ongu-15,000kg. Lowo mgqomo weqhwa ungagcina amakhilogremu ayi-15,000 wamaqhwa. Igumbi leqhwa likhulu ngokwanele ukugcina wonke ama-ice flakes enziwe ngesikhathi sasebusuku ngomshini weqhwa we-30T / day flake ice. Ikhasimende lingakhetha futhi amakamelo amakhulu e-ice. Sizosebenzisa ifreyimu yensimbi ukuxhasa umshini weqhwa, futhi ifreyimu yensimbi izothwala sonke isisindo somshini weqhwa. Igumbi leqhwa litholakala ngaphansi komshini weqhwa. Ama-ice flakes awela egumbini leqhwa futhi agcinwe ngaphakathi egcwele -...
Umshini weqhwa we-5T / wosuku wokwenza amathani ama-5 ama-ice flakes nsuku zonke, kungakapheli amahora angama-24. Siphakela umshini weqhwa we-5T / ngosuku. Ikhwalithi ephezulu newaranti yonyaka emi-2. Sizinikela emishinini yeqhwa kusukela ngo-2009, futhi imishini yethu ihlanganisa iningi lezimakethe zaseYurophu nezaseMelika. Silindele ukukuhlinzeka ngobuchwepheshe bethu beqhwa obuzinzile futhi obonga amandla. Umshini weqhwa we-5T / wosuku wokwenza amathani ama-5 ama-ice flakes nsuku zonke, kungakapheli amahora angama-24. 1.Iqhwa elenziwe yi-5T / day flake ic yethu ...